घिउ, चाकु र तरुलसँग लक्ष्मण थापाका कविता
मेरो एक मुठ्ठीको मुटुलाई
कहिले तारेभिरको उकालो चढिरहेँ
कहिले ओरालो झरिरहेँ ।
मेरो देशको माटोले बनेको छ ।
आफ्नो मुटुलाई माटोसँग जोडेर लेखिएको ‘मुटु’ शीर्षकको कविताका पङ्क्तिहरू सुनाउँदै उनी अगाडि बढे । मञ्चमा रहेको एउटा मात्र कुर्सी खाली छ । कविको आवाज सुनिन्छ तर कवि अगाडि देखिँदैनन् । माघे सङ्क्रान्तिको परिकार घिउ, चाकु र तरुल खाएर कार्यक्रम हलमा प्रवेश गरेका दर्शक तथा स्रोता एक छिन अलमलमा परे ।
पुछारसिटबाट उठेर कविता सुनाउँदै अगाडि पुगेका उनलार्ई मञ्चनिर पुग्नै लाग्दा साहित्यकार सरूभक्तले छेके । ढाकाटोपीमा सजिएका उनलाई हातमा रहेको सयपत्रीको माला लगाइदिएर सरूभक्तले बधाई दिँदै मञ्चमा बसाए । उनी मञ्चमा बस्नासाथ कार्यक्रम सञ्चालकले उनको परिचयका लागि साहित्यकार दीपक समीपलाई जिम्मा लगाए । रोचक पारामा परिचय दिएर कविता प्रस्तुतिका लागि उनले कविलाई आग्रह गरे । मञ्चमा बस्नासाथ केही भावुक बनेका उनले प्रारम्भमा उपस्थित दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिए । करिब दुई दशक अनवरत साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका उनले त्यसपछि कविता सुनाउन थाले ।
यो दृश्य हो ‘पुछारसिटे अभियान’ले आयोजना गरेको ‘एकल कविता वाचन’को । ‘घिउ, चाकु र तरुलसँग कविता’ नाम दिइएको कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका थिए कवि ‘लक्ष्मण थापा’ । संस्थाले एकल वाचनको पाँचौँ शृङ्खलामा कवि थापालाई उभ्याएको हो । कार्यक्रममा उभिएका कवि थापाले माटोका कविता मात्र सुनाएनन्, प्रेमको रस घोलेका कवितासमेत प्रस्तुत गरे :
ओ, मेरो युगकी अन्तिम राधिका !
म तिम्रो ओठको चास्नीमा डुबाउन चाहन्छु
प्रेमको सबैभन्दा पुरानो धून ।
घरिघरि यसरी प्रेमिल बनेका उनी अधिकांशतः मानव जीवनका उहापोहलाई आफ्ना कवितामा विषयका रूपमा समेट्थे । उनी वर्तमान नेतृत्वले इतिहासबाट हाम्रो गौरवगाथालाई स्वात्तै मेटाइदिएकोमा यसरी रोश प्रकट गर्छन् ।
हाम्रा छातीहरू कहिल्यै फराकिला हुन सकेनन्
हाम्रा तिघ्राहरू कहिल्यै दह्रा हुन सकेनन्
त्यसैले बाँसका टुप्पा झैँ निहुरिरहन्छन् हाम्रा स्वाभिमानहरू ।
वर्तमान पुस्ताका नेपालीहरूको घट्दो उचाइलाई कविले यसरी प्रस्तुत गरिरहँदा उनमा भूपी शेरचनको शैली प्रष्ट झल्किन्थ्यो । बीचबीचमा आफूमा अग्रज कविहरूको प्रभाव प्रष्ट भेटिने बताउँदै त्यसको स्पष्टीकरण दिँदा माहोल झनै रोचक बन्थ्यो । माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकका रूपमा दुई दशकभन्दा लामो समय बिताएका उनी कुशल व्यवस्थापकका रूपमा चिनिन्छन् । हजारौँ विद्यार्थीलाई ज्ञानको उज्यालो मार्गमा हिँडाएका यी कवि घरिघरि आफ्नो कलेज जीवनका फर्कन्छन् र ऊबेलाको पोस्टकार्ड युग सम्झँदै नोस्टाल्जिक बन्छन् :
रात रातभर नसुती नसुती बनाएका
शुभकामनाका रङ्गीन कार्डहरू
तिमीले कतै पट्याएर
पुरानो पुस्तकमा राखेकी छ्यौ कि ?
थुप्रै बिम्ब र प्रतीकहरूमा कविताका हरफलाई बुन्ने उनी कतै अत्यन्त सरल कविका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे त कतै बिम्बको बोझले अलि क्लिष्ट लाग्थे ।
राग मेघमल्हारको सूरवर्षासँगै
बादल नाच्दछ पहाडका थुम्काथुम्कामा
चुम्दै बुकीफूलका बोटहरू
र चिप्लेटी खेल्छ
चम्किलो कपोलको बुई चढेर ।
साहित्य सिर्जना मात्र होइन उनी साहित्यिक पत्रकारितामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । ‘सिउँडी’ नामक साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादकका रूपमा थापाले लामो समय खर्चेका छन् । गजल, मुक्तक, कविता, कथा मा निरन्तर उनको कलम चलिरहेको छ । उनका ‘मनको मूच्र्छना’ र ‘पलापला’ दुई गजल सङ्ग्रह र ‘पर्खालबाहिर’ नामक मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् भने कविता सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ । शिक्षा, समाजसेवा र साहित्यिक जीवनका विविध कुइँनेटालाई कविताका बीचबीचमा प्रस्तुत गरेका उनले कुल १४ वटा कविता प्रस्तुत गरे । उनका एक एक थान कविता वाचन गरेर कविद्वय सरस्वती श्रेष्ठ ‘सरू’ र अमृत सुवेदीले साथ दिएका थिए । देशप्रेम, सामाजिक विकृति, विद्रोह, मानवीय प्रेम र मानवतालाई कवितामा बुनेका उनका कविताका बारेमा साहित्यकार सरूभक्तले छोटो टिप्पणी गर्दै थापाको साहित्यसाधनाको प्रशंसा गरेका थिए ।
व्यस्त जीवनको अति व्यस्त समय साहित्यलाई दिएर थापाले नेपाली साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको बताउँदै सरूभक्तले साहित्यिक यात्राको सफलताको कामना गरे । सो कार्यक्रमको सञ्चालन कवि अल्पज्ञानीले गरेका थिए । संस्थाले असार पन्ध्रमा ‘दही चिउरासँग कविता’ र माघ १ गते ‘घिउ, चाकु र तरुलसँग कविता’ नाम दिएर वर्षमा दुईपटक एकल कविता वाचन कार्यक्रम निरन्तर रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको छ । साहित्य, शिक्षा र होमस्टे प्रबर्धनका क्षेत्रमा अग्रसर संस्थाले संस्कृतिसँग साहित्यलाई जोड्ने जमर्कोका साथ यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको संस्थाका अभियन्ता सुरज उपाध्यायले बताए ।
आजदेखि पोखरामा सैनिक अस्पताल सञ्चालन,यस्ता छन् अस्पतालका सेवाहरु
१४ फागुन, कास्की । नेपाली सेनाका हिताधिकारीका लागि लक्षित गरी…
क्यान इन्फोटेकमा सूचना प्रविधि सङ्ग्रहालय , पुरानो र नयाँ प्रविधि एकै ठाउँमा
१४ फागुन, कास्की । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घ…
गण्डकी प्रदेशले पनि दियो भोलि सार्वजनिक बिदा
म्याग्दीमा सातौँ पटक हिमपात , हिमपातले उच्च पहाडी क्षेत्रका विकास योजना प्रभावित
तीन बर्षमा रद्दभए ११ बालविवाह